fodya mishonga yekukuya
Cnc machine psac zvikamu
CNC hwokugaya hwakabvira Parts
Simbi yekudonha zvikamu
Tsika Delrin CNC Plastiki Yakagadzirwa Zvikamu HYVW30001
HY inopisa kutengesa herb grinder HYSZ100004
OEM Cnc Machining Metal Bike Zvikamu HYVC020004
OEM Anodized Aluminium CNC Machining Zvikamu HYVC020003
Huayi Fodya miriwo yekukuya HYZA07002
Bling Bling 4 yakaturikidzana Fashoni Grinder HYVC020002
Huayi 4 Zvimedu herb grinder HYZA07001
HUAYI Herb Kukuya HYWL60001
Mufushwa wefodya (kana kungoti, chigayo) chiumbwe chemagetsi chine zvikamu zvina zvinopatsanuka uye zvine mazino kana hoko zvakarongedzwa nenzira yekuti kana chikamu chepamusoro chashandurwa, zvinhu zvemukati zvakapwanyika. Chikamu chechitatu chinounganidzwa chakakwenenzverwa mukamuri repasi uye kusefa imwe kief. Chikamu chechina chinounganidzwa kief.
Tumira kubvunza Tumira neindaneti kwatiri
4 akaturikidzana miriwo mukuyi
Nhanho 1: Bvisa chivharo chepamusoro. Shandisa minwe yako kutyora mabhuru akakura ugoaisa pakati pemazino ekukuya. Usazvinetse nekuisa chero bud mukati chaiyo - apa ndipo panotenderedzwa magineti, saka hapana chinhu chiri pakati chinozosvuurwa.
Nhanho yechipiri: Tsiva pamusoro peguyo uye uipe kanenge kutenderera gumi, kudzamara hwese hwadonha kuburikidza nemakomba. Iwe unogona kubvisa kumusoro uye kuripurudzira kurutivi rwekukuya kuti ubatsire kusunungura chero zvidimbu zvinonamira mumazino.
Nhanho 3: Bvisa kamuri nemeno kuti uwane tswanda yakabata zvese zvako zvitsva pasi pevhu cannabis. Takura iyo mupombi yako, mubatanidzwa, kana blunt uye unakirwe!
Nhanho yechina: Kana uchinge waunganidza imwe kief mukamuri repazasi, bvisa imwe nepepa kana chishandiso chinopihwa (kwete zvese zvinotengwa neguyo zvinosanganisa imwe, asi zviri nyore chaizvo). Zvekare, iwe unogona kusasa kief pane mbiya kuti iwedzere kuve nesimba, kana kuichengetera kune chimwe chinhu. Ive nekuchengetera nesimbi inokasira, sezvo ivo vachigona kukwenya aruminiyamu matomu pamwe nekie yako!
Vamwe vanhu vanofarira kuisa huremu mukamuri yekie kuti vabatsire kugogodza resini kubva pachiratidziro ichipinda mundiro yepasi. Peni yakacheneswa kana nickel inoshanda zvakakwana izvi.
Kunyangwe ivo vagadziri vachiti zvakagadzirirwa kushandiswa nemishonga uye zvinonhuwira pakubika, zvinowanzo shandiswa kupaza, zvichikonzera chigadzirwa chinogona kuve nyore-kupetwa mu "mubatanidzwa" unopisa zvakaenzana. Fodya yekuchera miriwo inowanzo gadzirwa nesimbi kana plastiki uye inouya nemhando dzakasiyana uye nesimbi dzakakwenenzverwa.
Pashure: Kusvuta Vanokuya
Zvadaro: Yakakwira mhando Tsika CNC machine zvikamu
Chigadzirwa Chigadzirwa: Aluminium herb grinder
Zita Rekushandisa: Huayi
Pamusoro kupedzisa: Anodizing
Aluminium herb grinder, iyo inogadzirwa neAluminium T-6061, iri akareruka uye akapinza mazino, ari nyore kubata.
Kukuya Weed Herb
Herb Sora Kukuya
Tsika 4 dura Herb mukuyi HYCZ90001
Yakasarudzika logo logo anodized herb grinder HYCZ90003
sora weed grinder
aruminiyamu miriwo yekukuya
4 chikamu miriwo yekukuya
Iyo Yakazara Nhungamiro Yezvese Akanakisa Masora Gri ...
Hazvina mhosva kana iwe uchi vape, kumonera majoini kana kutora bong rips; kana zvasvika pakusvuta fodya, panogara paine chinhu chaunofanirwa kunge uine: chakakodzera kukuya. Heano edu mapiki eakanakisa ekukuya pamusika izvozvi. Hazvina mhosva kuti iwe uri cannabis newbie kana anofarira mwaka kana zvasvika kune ...
2 / F, Kwete. 46, Dapu Rd, Huaide, Humen Town, Dongguan, Guangdong Provice 523926, China.